27 Mfa ɔkyena nhoahoa wo ho,+ na wunnim nea ɛda de bɛba.+ 2 Ma ɔhɔho nyi wo ayɛ, na ɛnyɛ w’ankasa w’ano; ma ɔnanani nyɛ, na ɛnyɛ w’anofafa.+ 3 Ɔbo mu duru ne anhwea ade mã+​—ɔkwasea agyigyesɛm mu yɛ duru sen n’abien nyinaa.+ 4 Abufuw yɛ atirimɔden, na abufuhyew+ te sɛ nsuyiri; ninkuntwe de, hena na obetumi agyina anim?+ 5 Animka pefee ye+ sen ɔdɔ a ahintaw. 6 Sɛ ɔdɔfo pira wo a, efi nokwaredi mu,+ na ɔtamfo mfewano, gye sɛ wɔsrɛ.+ 7 Ɔkra a wamee tiatia ɛwokyɛm so, na ɔkra a ɔkɔm de no de, ade a ɛyɛ nwene biara yɛ no dɛ.+ 8 Sɛnea anomaa a oguan fi ne berebuw mu te no,+ saa ara na onipa a oguan fi ne tenabea te.+ 9 Sɛnea ngo ne aduhuam+ ma koma di ahurusi no, saa ara na ayɔnkofa mu dɛ a efi komam agyinatu te.+ 10 Nnyaw w’adamfo anaa wo papa adamfo, na nkɔhyɛn wo nua fie w’amanehunu da. Ofipamfo a ɔbɛn ye sen onua a ɔwɔ akyirikyiri.+ 11 Me ba, yɛ onyansafo, na ma me koma ntɔ me yam,+ na manya asɛm abua nea otwa me mpoa.+ 12 Onitefo hu mmusu na ɔde ne ho hintaw;+ ogyimfo a ɔfa mu no nya asotwe.+ 13 Nea odi ɔhɔho agyinam no, gye ne ntama;+ ɔbarima a okodi ɔbea huhuni akyi no, gye no awowade.+ 14 Sɛ obi de nne kɛse hyira ne yɔnko anɔpatutuutu a, wobebu no sɛ ɛyɛ nnome.+ 15 Ɔyere gyigyefo te sɛ ɔdan a enwini na ɛpam onipa osutɔ da.+ 16 Obiara a osianka no no sianka mframa, na ngo na ne nsa nifa beso mu. 17 Dade na wɔde sew dade ano. Saa na onipa nso sew ne yɔnko anim.+ 18 Nea ɔhwɛ borɔdɔma dua so no, ɔno nso bedi n’aba,+ na nea ɔwɛn ne wura no benya nidi.+ 19 Sɛnea anim hu anim nsu mu no, saa ara na onipa koma hu ne yɔnko de. 20 Adamoa* ne ɔsɛe amoa+ mmee da,+ na onipa aniwa nso mmee da.+ 21 Ɔnanfo kuku wɔ hɔ ma dwetɛ,+ na fononoo wɔ hɔ ma sika;+ onipa de, sɛnea n’ayeyi te na wɔde hu no.+ 22 Sɛ wode ɔwɔmma siw ɔkwasea muhumuhu fra awi wɔ waduru mu mpo a, ne nkwaseasɛm no remfi ne mu.+ 23 Ohu na hu wo nguan yiye. Fa wo koma si wo nguankuw so;+ 24 na ahonyade rentena hɔ afebɔɔ,+ na ahemmotiri nso rentena hɔ awo ntoatoaso nyinaa mu. 25 Sare kɔ, na sare foforo fifi, na mmepɔw so nhabamma yɛ bebree.+ 26 Nguammaa ma wo ntama,+ na mpapo yɛ asase bo. 27 Na wubenya mmirekyi nufusu a ɛbɛsõ w’aduan, wo fiefo aduan, ne wo mmeawa asetenade.+